I-Spaghetti esinezinhlanzi zikagalikhi | Ukupheka Kwekhishi
I-Spaghetti enezinhlanzi zikagalikhi
UMaria vazquez | | Pasta
Ukhathele ukulungiselela njalo i-pasta ngendlela efanayo? Lapha unayo iresiphi entsha ongashintsha ngayo amamenyu akho: I-Spaghetti enezinhlanzi zikagalikhi. Iresiphi enokunambitheka kolwandle okuzosithatha isikhathi eside ekhishini nokuthi ngingaqinisekisa ukuthi uzoba mnandi kakhulu.
Ngaphezu kokusebenzisa ngokunenzuzo amakhanda nama-shells ukwenza usoso okhanyayo, iresiphi iphinde ifake upelepele we-cayenne ukuyinika iphuzu elibabayo. Ngokwami ​​ngiyayithanda ngoba icashile, kepha ungenza ngaphandle kwayo uma nibangani abanezinongo. Ngabe ulinga ukukuzama?
Isikhathi esiphelele: 40 m
190 gr. ispaghetti
350 gr. wezimfanzi
I-3 clove kagalikhi
2 upelepele we-cayenne
3 wezipuni iparsley entsha
4 wezipuni ugologo
Sihluba ama-prawn bese sifaka zombili amakhanda nezikhumba epanini elinezipuni ezimbalwa zamafutha omnqumo. Pheka ngomlilo ophakathi ngenkathi sichoboza amakhanda yama-prawn ngesipuni esitshiwe ukuze akhulule wonke ujusi wawo.
Lapho amagobolondo ebomvana, sifaka ugologo futhi sayiyeka yancipha cishe ngokuphelele.
Ngakho, sifaka ingilazi yamanzi, ikhava bese upheka imizuzu eyi-15. Sihluza izikhumba namakhanda ukuthola umhluzi we-prawn esigxile kuwo.
Ake sipheke ispaghetti epanini elinamanzi nosawoti, ngokulandela imiyalo yomkhiqizi. Uma usuqedile, khama bese ugcine.
Ngenkathi i-pasta ipheka, sigaya ugarliki kahle nepelepele futhi siyabekisa.
Sishisa izipuni ezintathu zamafutha omnqumo epanini lokuthosa emlilweni ophakathi. Sifaka ama-prawn futhi uma zipinki futhi zithambile ngegolide ngandlela thile, siyazikhipha.
Sifaka isipuni esisodwa noma ezimbili zikawoyela epanini futhi susa i-garlic egayiwe kanye nopelepele. Lapho ugalikhi eqala ukuthatha umbala, engeza uhhafu womhluzi weprawn kanye neparsley eqoshiwe, bese uphakamisa ukushisa ukuletha isosi emathunjini bese unciphisa.
Sifaka i-spaghetti epanini uhlanganise ukuze zikhulelwe kahle ne-sauce. Uma kunesidingo, engeza umhluzi omncane ukuze ungomi.
Ngaphambi kokuphaka, sifaka ama-prawn.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Pasta » I-Spaghetti enezinhlanzi zikagalikhi
Izibopho zomnsalo wemifino ne-turkey egayiwe nokhilimu